Nagu saabsan - Fan Lenting Centrifugal Ventation Fan
Hawo -qaadista Lang Tai Centrifugal waa mid ku xeel -dheer naqshadaynta, soo -saaridda taageerayaasha hawo -mareenka centrifugal. Warshadeena hawo -mareenka ayaa daboola aag dhan 20,000 m2, aagga dhirta oo ka badan 10,000 m2.
Waxaan leenahay in ka badan 40 farsamoyaqaanno khibrad leh oo leh cilmi baaris xooggan iyo horumarinta karti. Waxaan leenahay waaxyo cilmi -baarista teknolojiyadda, sida Xafiiska Naqshadeynta Gawaarida, Xafiiska Naqshadeynta Fan, Xarunta Imtixaanka Waxqabadka Fan; Xarunta Jilidda CFD. Waxaan sidoo kale leenahay xarumo shaqo oo jilitaan badan oo naqshadeyn ah oo heer-ganacsi ah. Taageeradaas farsamo, waxaan ku siin karnaa badeecooyin & adeegyo kala duwan oo la habeeyay tusaale ahaan, taageerayaasha awoodda gaarka ah, taageerayaasha xawaaraha badan, taageerayaasha mootada, iyo taageerayaasha heerkulka hooseeya. Waxaan sannad walba soo saari karnaa in ka badan 200,000 oo taageerayaal oo noocyo kala duwan leh.
Waxaan leenahay taageereyaal aad u kala duwan, oo ay ku jiraan Taageerayaasha Centrifugal-Forward-curved-blade, Taageerayaasha Centrifugal ee gadaal-qalooca-leh, Taageerayaasha Centrifugal-ka aan ahayn. Badeecadaheena waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa habab kala duwan oo hawo-bixin-iyo-qiiqa ah sida nidaamyada hawo-qaadista HVAC, hababka hawo-hawo cusub, cutubyada wax-qabadka hawada, cutubyada hawada-ka-samaynta iyo hababka hawo-qaboojinta qaboojiyaha ee dhismayaasha warshadaha, isbitaallada, dugsiyada , garoomada, hudheelada, gaadiidka tareenka, tababarayaasha basaska iyo beeraha kale.
Waxaan leenahay qalab wax soo saar oo horumarsan iyo hab imtixaan oo kaamil ah. Waxaan leenahay in ka badan 180 nooc oo ah qalab wax soo saar oo kala duwan oo ay ku jiraan qalabka mashiinada CNC, qalabka cadaadiska sameeya iyo qalabka wax soo saarka matoorka, iwm Waxaan kaloo leenahay laba qol-hawleed iyo in ka badan 40 qaybood oo ah qalab tijaabo xirfadeed. Awooddeena wax -soo -saarka iyo kormeerka ayaa ku jira heerka hoggaaminta.
Waxaan mar walba muhiimad siineynay dhismaha nidaamka maareynta wax soo saarka maalin kasta. Waxaan ka gudubnay shahaadada IS09001 taageerayaashuna waxay dhaafeen Shahaadada CCC. Taageerayaashu waxay gaareen heerka 3 badbaadinta tamarta ee Shiinaha.
Gaar ahaan, waxaannu u samaynaynay hab hawo oo loogu talagalay codsiyada guurguura oo leh kooxo batteri ama koronto kale. Korantada keydinta tamarta iyo nidaamka koontaroolka korontada ee waxqabadka sare leh ayaa lagu ansixiyay arjigan “DC Ventilation”.
Fadlan waxaad dareentaa lacag la'aan si aad noogu soo dirto tilmaamahaaga waxaanan kuugu soo jawaabi doonaa sida ugu dhaqsaha badan. Waxaan helnay koox injineer xirfad leh oo u adeegta baahi kasta oo faahfaahsan. Muunado bilaash ah ayaa laga yaabaa in adiga shakhsi ahaan laguu soo diro si aad u ogaato xaqiiqooyin aad u badan. Si aad u daboosho rabitaankaaga, fadlan runtii waxaad dareentaa kharash la'aan inaad nala soo xiriirto.
Aagga Horumarinta Dhaqaalaha, Degmada Linzi, Magaalada Zibo, Gobolka Shandong